दशैमा कस्ता मानिसले कति मासु खाँदा स्वास्थ्यलाई असर पर्दैन ? – Gulminews
Home/जीवनशैली/दशैमा कस्ता मानिसले कति मासु खाँदा स्वास्थ्यलाई असर पर्दैन ?
दशैमा कस्ता मानिसले कति मासु खाँदा स्वास्थ्यलाई असर पर्दैन ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ आश्विन १३, शुक्रबार ०१:२३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । हुन त अहिलेको समय पहिले जस्तो छैन । पहिले मासु खान दसैं नै कुर्नुपर्दथ्यो तर अहिले धेरैजसो मानिसको भान्सामा दिनहुँजसो मासु पाक्छ । यति हुँदा हुँदै पनि अरु बेलाभन्दा दसैंमा मासुको विभिन्न परिकार बनाएर खाने चलन छ ।
मानिसहरु पनि दसैं नै हो भनेर खानसक्ने गरी मासु खान्छन् । दसैंमा विशेषगरी रातो मासु पाक्ने भएकाले जतिसक्दो खाँदा स्वस्थ मानिसलाई नै असर पुग्छ भने रोगीलाई थप असर गर्दछ । तसर्थ, आफ्नो रोगको प्रकेति हेरेर कति मासु खान मिल्छ, त्यो बुझेर खाएमा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दैन ।
– कोलेस्ट्रोलका रोगीले खसीको मासुको साटो ह्वाइट मिट नतारीकन थोरै तेल हालेर पकाएर खाँदा फाइदाजनक हुन्छ ।
– दसैंमा धेरैको घरघरमा खसी काट्ने भएकाले आन्द्रा, भुँडी, कलेजोदेखि सबै भाग खाइन्छ । खसीको मासुमा चिल्लोको मात्रा धेरै हुने भएकाले भरसक कम खाँदा नै राम्रो । सकेसम्म ग्रेभी मासु खानुहुँदैन ।
– मोटापना भएका व्यक्तिले एकदिनमा मासुको ३-४ पिसमात्र मासु खान मिल्छ ।
– दसैंमा टन्न मासु खाने र बसीबसी तास खेल्ने हाम्रो बानी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निकै घातक हो । मासु खाने र यसका साथै शारिरिक व्यायाम गर्ने गर्नुपर्छ ।
नानी शोभा शाक्य (डाइटिसियन, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज)